"> ‘सेक्स वर्कर्स’लाई भेटेपछि… – www.agnijwala.com
एक–अर्काप्रतिको आकर्षण, मानवीय सम्बन्ध र यौनकर्म फरक कुरा हुन् । हामीले चाहेर–नचाहेर हाम्रो देशको यौनबजार फैलने क्रममा छ । र, यो फैलँदो बजारका उपभोक्ता हाम्रै देशका नागरिक हुन् ।
विपरीतलिङ्गीसँगको सम्बन्धलाई यौनसँग जोडेर हेर्ने चलन हामीकहाँ मात्र होइन विश्वमै छ । समयक्रममा समलिङ्गी सम्बन्धहरू पनि अघि बढिरहेका छन् । एक–अर्काप्रतिको आकर्षण, मानवीय सम्बन्ध र यौनकर्म फरक कुरा हुन् । हामीले चाहेर–नचाहेर हाम्रो देशको यौनबजार फैलने क्रममा छ । र, यो फैलँदो बजारका उपभोक्ता हाम्रै
देशका नागरिक हुन । यौनकर्मी महिलालाई विभिन्न उपमा दिने गरिए पनि खरिदकर्ताहरूलाई भने हामीकहाँ खासै त्यस्तो विशेष उपमाबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको छैन ।
यौनकर्मी महिलालाई अपराधीलाई झैँ व्यवहार गर्ने गरिएको छ । उनीहरूको यौनको मोलतोल गर्नेहरू पक्राउ पर्दैनन् । केही यौनकर्मी महिलाले इथिक्सको कुरा पनि गरे ।
घरेलु हिंसामा परेका मात्र नभई द्वन्द्वपीडितहरूको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेछ । मुलुकमा १० वर्षे युद्धका कारण व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा द्वन्द्वपीडितहरू शरीर बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु कति पीडादायी कुरा हो भनेर शायद भनिरहनुपर्दैन । ‘श्रीमानको उपचार गर्दा ऋणमाथि ऋण थपिएपछि म रत्नपार्क पुगेँ, निको भएपछि यस्तो पेसामा लागिस् भनेर उनले छाडिदिए’ सुन्दा मनमा पहिरो जाने यस्ता पीडादायी वास्तविकता त उनीहरूसँग कति छन् कति । महिलाहरू रत्नपार्क, बालाजु, कोटेश्वर, बसपार्कतिर बसेको देख्नेले तिनलाई कसले र केले त्यहाँ पुग्न बाध्य बनायो ? भनेर सोच्दैन । कति श्रीमान्को मानसिक अवस्था बिग्रिएपछि त्यहाँ पुगेका छन्, कतिले छोराछोरीको पेट पाल्नका लागि पेसा अपनाएका छन् । ‘हामी हाम्रा छोरी–बुहारीले यस्तो पेसा गरून् भन्ने चाहँदैनौँ,’ सबैको भनाइ एउटै थियो । यसको अर्थ उनीहरू यो राम्रो र सहज पेसा हो भनेर आएका होइनन् ।
देहव्यापार अपराधीकरण गर्नुपर्ने कुरा हो कि होइन ? विश्वका धेरै मुलुकमा यो गैरकानूनी छ, तर अपराध मानिँदैन । कतिपय देशमा कानूनी मान्यता दिइएको छ, तर नियमन गरिन्छ । कतिपय देशमा यौन बेच्नुलाई अपराध मानिँदैन, तर किन्नुलाई अपराध मानिन्छ । क्यानडामा यस्तो व्यवस्था छ । जर्मनीमा देहव्यापार कानूनी छ, तर महिलाको सुरक्षाका लागि यति धेरै प्रावधानहरू राखिएको छ कि सेक्स वर्करसँग जानका लागि ग्राहकले धेरैपटक सोच्नुपर्छ । हामीकहाँ कानून छैन, तर यौनकर्मीलाई मात्र नभई कुनै पनि महिला–पुरुषलाई होटेलमा बास बसिरहेको ठाउँमा पनि छापा मारेर पक्राउ गर्ने गरिएको छ । काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख फेरिनासाथ शान्ति सुरक्षाका नाममा होटेलका बन्द कोठाहरूमा छापा मार्ने गरिएको छ । अहिले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनले त्यसरी कोठामा छापा मार्न दिँदैन, पाइँदैन । तर, प्रहरीबाट कानूनको पालना भइरहेको छैन ।
‘श्रीमानको उपचार गर्दा ऋणमाथि ऋण थपिएपछि म रत्नपार्क पुगेँ, निको भएपछि यस्तो पेसामा लागिस् भनेर उनले छाडिदिए’ सुन्दा मनमा पहिरो जाने यस्ता पीडादायी वास्तविकता त उनीहरूसँग कति छन् कति ।
गत वर्ष जेनेभामा आयोजित सिड सेसनमा परिचित केही बहिनीहरूले ‘म सेक्स वर्करको हैसियतमा बोलिरहेकी छु’ भनेर आँखैअगाडि बोल्दा अचम्म लागेको थियो । त्यतिबेला केहीले हामीकहाँ पनि सेक्स वर्कर छन् र ? भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए । अहिले काठमाडौंमा मात्रै ४० हजारभन्दा माथि यौनकर्मीको सङ्ख्या रहेको अनुमान गरिएको छ । वृद्धा महिलाको बस्ने, खाने समस्या छ । गत हप्ता राजधानीमा भेटेका यौनकर्मी महिलामा अचम्मको विविधता देखेँ । मधेसी महिला पनि राजधानीको सडकमा यौनकर्ममा संलग्न छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर यो हाम्रो वास्तविकता हो । क्षेत्री, बाहुन, विभिन्न जातजाति, क्षेत्र सबैतिरका महिला पेसामा छन् । यो समावेशी भयो भनेर खुसी मान्नुपर्ने कुरा भने होइन । राज्यले यसलाई धरपकड गरेर होइन वैकल्पिक कामको व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो देशमा यो पेसा राजधानीमा मात्र सीमित छैन । विभिन्न जिल्लाहरूमा सेक्स वर्करहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा बहस र छलफल हुनु आवश्यक छ । धरपकड र अपमान गर्नुअघि राज्यले विकल्प दिन सक्नुपर्छ । घटना र बिचार